Iingcebiso zentengiso yasekhaya zoMthengisi wexesha lokuqala-zininzi
Isilimela 02, 2016 by UDixie Somers, Iimbono zizonke:
Uninzi lwabantu luyacaphuka xa lucinga ngale khomishini kuya kufuneka ihlawule xa kuthengiswa ngearhente ethengisa izindlu, kodwa ufumana ixabiso elininzi kwimali oyisebenzisileyo. Ingcali evela kwinkampani efana Iqela leNtengiso yeMali yasePruzt Uyakusebenza ngokungakhathali ukuqinisekisa ukuba ikhaya lakho lipapashwa ngokubanzi, kubandakanya ukubeka uphawu kwindawo egcadiweyo yakho, ukudweliswa kwekhaya lakho kwiwebhusayithi yomatshini wakhe kunye nokuluhlu kuluhlu lweeNkonzo eziLuhlu ezininzi. Iiarhente zeearhente zeearhente zorhwebo zihlala zikhuthaza indlu yakho kwiisayithi zosasazo lwentlalo ngokunjalo.
Phucula isibheno sakho
Enye indlela yokuba 'ubhengeze' ikhaya lakho ungakhange uzame uzama ukuba ibonwe ngabantu abadlula ngendlela. Xa indlu yakho iyathengiswa kwaye inophawu kwiyadi engaphambili, indlela ekhangeleka ngayo ikhaya lakho langaphandle yintengiso enkulu yabathengi abanokubakho. Ke kubalulekile ukuba usebenze ukuphucula isibheno sekhaya lakho. Rhoqo yenza imisebenzi yokulungisa njengokucheba ingca, ukunkcenkceshela, ukutsala ukhula kunye nokuthatha inkunkuma kunye nenkunkuma. Ukwafuna ukuba uqiniseke ukuba ulungisa nayiphi na imiba enokubonisa kakubi ekhaya lakho. Oko kunokubandakanya ukubuyisela endaweni amabala angenanto kwi-lawn yakho, ukucheba amatyholwana kunye nemithi, ukupeyinta itreyim yakho kunye nokulungisa iindawo zokugcina izidumbu kwikhonkrithi.
Likhuphe igama ngokwakho
Nangona umthengisi wakho wezindlu ethengisa izindlu uza kusebenza nzima ukukhupha ilizwi malunga nendlu yakho, kufanele njalo. Sebenzisa iiakhawunti zakho zeendaba ezentlalo ukuxelela abantu ukuba uthengisa ikhaya lakho kunye nekhonkco kwiphepha le-arhente yakho yearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba. Xelela abahlobo bakho, usapho kunye nabasebenza kunye malunga nekhaya lakho elithengiswayo kwaye ubuze ukuba bayazi na nabani na okhangela ukuthenga.
Ukuqinisekisa ukuba uyibhengeza ngokufanelekileyo ikhaya lakho linyathelo elikhulu lokuthengisa. Okukhona abantu beyibonayo kwaye bebangcono umbono owenzayo, kokukhona uya kuthengisa ngokukhawuleza kunye nemali eninzi.
UDixie Somers Juni 2, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Iingcebiso zeNtengiso, Umthengisi wexesha lokuqala, Intengiso yasekhaya, Intengiso yePropathi, Intengiso yeNtengiso yePropathi. Bookmark le Permalink.
Septemba 7, 2017 Iingcebiso ezintlanu zokwenza ukuba Ikhaya lakho lilungele ukuthengisa Ukuba ucinga ngokubeka ikhaya lakho emarikeni, kukho izinto ezimbalwa onokuzenza ukuze uzilungiselele. Ikhaya lakho lisenokungakulungeli ukuba kwintengiso okwangoku, kodwa umsebenzi omncinci uya kude. Ezi ngcebiso ze-DIY zingenza ukuba ikhaya lakho lilungele ukubonwa ngabathengi abanokubakho. Sebenza ekhitshini lakho ukuba awukwenziwanga ngokutsha ikhitshi lakho, kunokuba lixesha elifanelekileyo lokusebenza kuyo. Abathengi bahlala bethatha isigqibo sokuba bayathenga okanye badlule kwindlu esekwe ekhitshini. Kwaye nekhitshi elibi linokuhlisa ukuthengisa kwakho […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya